नियन्त्रण भएन उपत्यकाको हैजा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नियन्त्रण भएन उपत्यकाको हैजा
२०७२, ३२ श्रावण सोमबार ०१:२० मा प्रकाशित
उपत्यकामा यस वर्ष पनि हैजा देखिएको छ । हैजाका केस देखिए पनि नियन्त्रणबाहिर नगएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन् । हरेक वर्ष गर्मी र बर्खामा उपत्यकामा हैजा देखिने गरेको छ । पछिल्लो एक महिनायता सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा झाडापखाला लागेर आएकामध्ये ३८ जना र पाटन अस्पतालमा आएकामध्ये तीनजनामा हैजाको जीवाणु फेला परेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
शुक्रराज अस्पतालमा दैनिक औसत ३० जना झाडापखालाका बिरामी आइरहेका छन् । अस्पतालका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले गर्मी र बर्खासँगै उपत्यकामा झाडापखालाका बिरामीको संख्या बढी भएको भन्दै तीमध्ये केहीमा हैजाको जीवाणु देखिएको बताए ।
हैजा भिभिरो कलेरा भनिने जीवाणु संक्रमित व्यक्तिको दिसाबाट जमिनमा आउने र पानी वा खानेकुराका माध्यमबाट अर्को स्वस्थ व्यक्तिमा प्रवेश गरी रोग फैलाउने काम गर्छ । सो जीवाणु शरीरमा प्रवेश गरेपछि एक्कासि बान्ता र पखाला लाग्न थाल्छ ।
‘हैजा एकदमै कडा रोग हो । यसले पेट दुखाउँदैन, तर एक्कासि झाडाबान्ता हुन थाल्छ,’ डा. पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘समयमै उपचार नगरे कसैकसैको केही घन्टामै ज्यान पनि जान सक्छ ।’ शुक्रराज अस्पतालमा अहिले बल्खु, कुलेश्वर, कालिमाटी, भोटेबहाल, धोबीघाट, टेकुलगायतका स्थानबाट ल्याइएका बिरामीमा हैजाको जीवाणु देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । कालिमाटी, कुलेश्वरलगायतका क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हैजा देखिएको थियो ।
देशभर ८ हजार १७ जनामा संक्रमण, १५ जनाको मृत्यु
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार १७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको
जलेश्वर अस्पतालका मेसु साहमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारी चिकित्सक संघको माग
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारी चिकित्सक संघ नेपालले जलेश्वर अस्पताललका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सतिस साहमाथि
ओमिक्रोन संक्रमणबाट विकास भएको एन्टीबडीले डेल्टा भेरियन्टविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छः अध्ययन
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । ओमिक्रोन संक्रमण भइ निको भएका व्यक्तिको शरीरमा विकास हुने एन्टीबडीले कोरोनाका